Posted by Tranquillus | May 30, 2018 | Xafiiska
Haduu Ereygan yahay processor-ka eray-tixraaca waxaa jira habab kale oo bilaash ah iyo dhammaanba waxtarka waxtar leh.
Soo hel xulashadeena barnaamijka dhammaystiran ee bilaashka ah ee loogu talagalay habeynta erayada.
Xafiiska Furitaanka, oo ah qaabka ugu fiican ee xor ah
Barnaamijkani waa kan ugu caansan kadib Word iyo sababta wanaagsan waxay u egtahay tan midi ah oo leh qolka dhameystiran.
Xafiiska Furitaanka waxaa suurtogal ah in la abuuro, la dhoofiyo loona bedelo dukumiintiyada lagu sameeyay hoosta MS Office (Word, Excel ama Powerpoint).
Waxaad xor u tahay inaad ku kaydiso qaab asalka ama qaabka OpenOffice.
Barnaamijkani waa mid aad u macquul ah, sidaas darteedna waa sahlan tahay in la isticmaalo.
Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa, sida Word, in aad sii wadato adigoo abuuraya jaantusyo ama sawirro.
Google Docs, ereyga ereyga ee internetka:
Google Docs way ka duwan tahay barnaamijyada daaweynta kale sababtoo ah waxay u baahan tahay rakibid.
Waa adeeg bilaash ah oo ay Google bixiso oo aad abuuri karto, isbedeli karto oo aad wadaagi karto dhammaan noocyada dokumantiyada, qoraallada, sawirrada, bandhigyada, feylka.
Faa'iidooyinka isticmaalka Google Docs waa kuwo badan si ay u bilaabaan awoodda ay u heli karaan dukumiintiyada meel kasta, laakiin sidoo kale inay wadaagaan oo ay la shaqeeyaan dadka kale iyo ugu dambeyn, si ay u habeeyaan iyo u eegaan casriga ama kiniiniga.
Xafiiska WPS, oo ah processor-yo fudud oo dhamaystiran oo dhamaystiran:
Nidaamkan daaweynta ayaa loo heli karaa si bilaash ah si aad uga codsato difaacayaasha ugu kalsoon ee Ereyga.
Xidhiidhku wuxuu ku dhow yahay isla ekaanshaha MS Office oo leh hawlgal aasaasi ah oo aasaasi ah.
Marka lagu daro qoraalka, qoraalada iyo bandhigyada, waxaad abuuri kartaa.
Iyadoo laga hadlayo isdhexgalka, wax walwal ahna kuma jiraan kooxdan sababtoo ah WPS Office wuxuu aqbalaa dhammaan qaababka Microsoft Office.
READ Excel Tips First Part-Doping Your Productivity
LibreOffice, oo ah baakad bilaash ah:
Farsamaynta ereyga, faafinta ama bandhigga, waxa kale oo suurtogal ah in lagu gaaro dhammaan tan iyada oo la adeegsanayo software-ka loo yaqaan "LibreOffice".
Waa mid ka mid ah barnaamijka ugu fiican ee qoraalka ah ee ay u fududahay isticmaalka iyo is waafajinta noocyada oo dhan.
Si kale haddii loo dhigo, waxay qaadataa mabaadiida aasaasiga ah ee OpenOffice laakiin leh interface ku habboon.
Sidaa darteed waa software si ku habboon u habboon isticmaalka shakhsi ahaan iyo xirfadba.
Zoho Writer, Walaalka yar ee Google Docs:
Maqaalkan ereygan ayaa sidoo kale laga heli karaa internetka, oo kaliya samee xisaab.
Waa qalab fiican oo loogu talagalay shaqada iskaashiga sababtoo ah waxay u ogolaaneysaa in ay wadaagto dukumiintiyada si nabad ah.
Ugu dambeyntii, qaabka indha-indheynta ah ayaa kuu ogolaanaya inaad sameysid qoraalka si aad uhesho markaad ku xigto internetka.
Naqshadeeynta qoraalka Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeSidee loo maareeyaa qof saaxiib ah oo leh fikrad xun?
socdaSidee udheer ujeeda shaqada?